OKAN - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > Baro + Dabagal > OKAN
Baro + ogow
(Waxbarashada Sare ee Fasalka Koowaad)
Yaan ahay? Maxaan samayn karaa? Maxaan rabaa? La-ogaanshaha waxa ay tahay tayadaadu waa mid aad muhiim u ah. Adiga oo aad nala raadineyso!
Waxaad raacdaa casharrada shahaadada koowaad. Waxaad dhadhamineysaa farsamooyin kala duwan oo aad ka heshaa tayadaada. Waxaad baraneysaa xawaarahaaga adiguna aad hesho hanuun habboon. Sidan ayaad u dooraneysaa dookha waxbarasho ee saxda ah ee shahaadada 2e!
Waxaad raaci kartaa wadadan Plantin campus.
Fasal dib-u-soo-galis ah Ardayda cusub-luuqad-ajnebi
ah Fasal dib-u-habeyn loogu talagalay dadka cusub ee luqadaha ajnabiga ah baro dhalinyarada (inta udhaxaysa sannadihii 12 iyo 18) ee kaliya ee ku yaal Belgium Nederlands. Soo dhaweyn diiran oo ku taal OKAN. Waxaan u diyaarineynaa ardayda inay u gudubto qaab waxbarasho oo ku habboon awooddooda iyo danahooda.
OKAN ma ahan sheeko gaar ah oo ku saabsan dhismahayaga.
Habka "Discovery Learning +"Waxa kale oo lagu dabaqaa ardayda OKAN.
Intaa waxaa dheer oo aan mareyno annaga is-beddelidda hababka raadinta waxbarasho dheeraad ah oo ku habboon ardayga.
Baro wax walba oo ku saabsan Barashada + Ka faa'iideysiga xog guud.
- Waxaad udhaxeysaa sanadada 12 iyo 18.
- Waxaad ku maqnayd Belgium in ka badan sanado 1.
- Luqadaada hooyo ama luqada hooyo ma ahan Dutch.
Beddelidda fasalka 1:
Da ': 12 sanadka 14
Kooxda Bartilmaameedka: dhalinyarada doonaya in ay u guuraan fasalka X-X-X ee B-da laakiin weli waa inay ka shaqeeyaan xirfadaha luqadda
Bedelka? Ardaydani waxay raacaan OKAN + modules leh 1B.
Beddelidda fasalka 2:
Da ': 14 sanadka 18
Kooxda Bartilmaameedka: dhalinyarada doonaya inay u guuraan tababarka ficilka (tusaale ahaan shahaadada 2 ee BSO, L + W, VDAB, waxbarashada dadka waaweyn) laakiin wali waa inay ka shaqeeyaan xirfadaha luqadda mana wali dooran jiheyn gaar ah.
Bedelka? Ardaydani waxay raacayaan OKAN + naqshadeynta nafaqada, (daryeelka), birta iyo qoryaha.
Beddelidda fasalka L + W:
Da ': 16 sanadka 18
Kooxda Bartilmaameedka: dhalinyarada doonaya in ay u guuraan Barashada + Working laakiin wali waa inay ka shaqeeyaan xirfadaha luqadda.
Waxaad cashar ka heleysaa Plantin campus ee Borgerhout.
2140 Borgerhout (Antwerp)
Waxaad naga heli kartaa baska 20 - baska 21 - baska 30 - baska 34
Agaasime Ku-xigeenka Waxbarashada + Soo-kabashada
03 / 217 43 40